छोरासँग बिहे गरेकी रुसी ब्लगर आमा बन्दै… – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/छोरासँग बिहे गरेकी रुसी ब्लगर आमा बन्दै…
आफ्ना सौतेनी छोरालाई बाल्मासोभाले ७ वर्षको उमेरदेखि नै देखेकी थिइन् । त्यतिबेला बाल्मासोभाको उमेर २२ वर्ष थियो । सोही समयदेखि आफु सौतेनी छोराको निलो आँखाबाट प्रभावित भएको उनले बताइन् । आफ्ना पूर्व सौतेनी छोरा अर्थात् युवा श्रीमान्सामु आर्कषक देखिन उनले प्लास्टिक सर्जरी गरेको बताइन् । ‘यद्यपी, यहाँ एउटा के कुरा महत्वपूर्ण छ भने उनी मेरो दागसहितको अनुहारलाई देखेरै नै प्रममा परेका हुन्,’ उनले भनिन् ।
अरेबियन महिलाहरु किन यती सु न्दर हुन्छन् ? यस्तो छ रहस्य !
यी पुराना नोटको मुल्य अहिले लाखौ …. सेयर गरौँ भएकाले अनलाईमा बेचौं !